Kubata: ndeichii uye kuti ungasarudza sei chakakodzera pane zvaunoda | Linux Vakapindwa muropa
Kubata: ndezvei uye kuti ungasarudza sei chaicho
Na kubata kunovhura kuwanda kwemikana, zvese zororo nebasa. Nayo unogona kuva nenzvimbo pane sevha yekugamuchira peji rewebhu iro rinowanikwa nemunhu wese, kungave uine rako bhizinesi saiti, makosi ako, kukwidziridzwa, chitoro chako chepamhepo, rako bhurogu kubva kwaunoparadzira, gadzira rako rako rekuchengetedza gore, gallery, uye yakareba etc.
Parizvino, pamwe neshanduko yese iri kuitika pasi penyika nekuda kwehunyanzvi hutsva, uye nekumhanyisa kunokonzerwa nedenda, digitize bhizinesi rako Uye kutanga kubva paInternet zvinogona kureva musiyano uripakati pebhizimusi rinoparadza kana budiriro. Naizvozvo, iwe unofanirwa kufunga nezve mukana wekuve neyako webhusaiti kuti usvike kupfuura vashandisi vemuno kana vatengi.
1 Ndekupi kwekutenga kuitisa?
2 Ndedzipi mhando dzekugamuchira dziripo mumusika?
3 Kuhaya domaini uye kubata pamwechete, ndiyo sarudzo yakanakisa?
4 Ndeipi yekusarudza?
5 Mitengo VS Hunhu
Ndekupi kwekutenga kuitisa?
Para tenga kuitisa une zvakawanda zvingasarudzwa zviripo pamambure. Kune huwandu hukuru hwevapi veaya marudzi emasevhisi. Uye zvakare, ruzhinji rwevapi vanopa mamwe masevhisi mukuwedzera kune kuitisa mitengo yemakwikwi, senge kunyoreswa kwesizinda, email, nezvimwe.
Kune akawanda masevhisi anozivikanwa aunofanirwa kusarudza pamusoro pevamwe vasinganyatso kuzivikanwa iwo angave nawo mitengo inokwezva zvinotyisa, uye kunyange yemahara mune dzimwe nguva, asi inoshaya chengetedzo, haipe chero rutsigiro kana vimbiso, uye maseva ane njodzi nekumhanyisa uye kuwanikwa, saka webhusaiti yako ichave ingori nguva dzose pasi kana kuenda zvishoma zvishoma, chimwe chinhu chinoita kuti iwe tiza nekutya vashanyi vako.
Muenzaniso wakanaka Raiolanetworks.es, kambani yeSpain ine maseva mudunhu reEuropean, chimwe chinhu chakanyanya kukosha kana iwe uchida kuona kuti vanoteerera nemitemo yekuchengetedza data yeEurope.
Ndedzipi mhando dzekugamuchira dziripo mumusika?
Ikozvino pane akati wandei mhando dzekugamuchira mumusika, imwe neimwe iine zvayakanakira nezvayakaipira, uye nemitengo yakasiyana. Naizvozvo, zvakakosha kuti uzive mhando yega yega kuti uzive kuti ndeipi iyo inokufarira zvakanyanya zvichienderana nechinangwa chauri kutsvaga kana zvaunoda. Pakati pezvakanyanya kukosha ndezvi:
Yakagovaniswa kana kugovaniswa: kuita fananidzo kwakafanana kana iwe uchigara mufurati yakagovaniswa, saka iwe uchagovana zviwanikwa nenzvimbo yacho nevamwe. Panyaya yekugamuchira, zvakangofanana, vese vashandisi vanoshandisa sevhisi inoitirwa pane imwechete server, izvo zvisina kukodzera kuti uwane mabhenefiti akanakisa nekugadzirisa saiti panguva yako yekuzorora, asi inova yakachipa pashiri sarudzo . Zvinogona kukwana kune avo vari kutsvaga kuitisa diki blog kana webhusaiti ine diki traffic, nekuti kupfuura izvo vanogona kuona kushomeka kwenzvimbo kana kumhanya.
Kwakavharwa nenyama kana kwakavharwa nenyama: iri kuwedzera kuve inozivikanwa, uye ine hunyanzvi hwekukwanisa kuyera zvinoenderana nezvido zvako, pasina miganho. Semuenzaniso, unogona kutanga newebhusaiti diki ine traffic shoma, uye bhizinesi rako parinobudirira kana webhusaiti yako ichikwezva mamwe maonero, unogona kusimudzira zviwanikwa zvaunazvo nekuwedzera mubhadharo wako. Uye zvakare, iwe unofanirwa kuziva kuti iko kuwedzera kuri otomatiki, saka kana iwe uchidarika iyo yazvino muganho, iyo nyowani yepamusoro yekugona hurongwa ichaitwa yakavhurwa.
Dedicated: inopesana neyakagovaniswa, senge paunoroja kana kutenga furati iwe wega. Mune iyi mhando yevhavha uchave uine zvese Hardware uye zviwanikwa zvako, usingazvigovane nevamwe. Kune rimwe divi, izvi zvinoreva mutengo wakakwira, asi zvinokupa iwe kuita kwakanyanya uye kushanduka kwehutariri hwayo. Ndokusaka inogona kuve iri imwe nzira huru kune mawebhusaiti emakambani makuru kana nyanzvi. Ehezve, iwe uchazoda ruzivo kune manejimendi ayo, kana kuhaya kwenyanzvi kwayo ...
VPS (Virtual Yakavanzika Server): Iyo chaiyo yakavanzika sevha, sekutaurwa kwezita rayo, iri chaiyo chikamu cheicho chaicho server. Ndokunge, sevha ichave yakakamurwa kuita akati wandei michina ine yavo pachavo zviwanikwa (network, CPU, RAM, kuchengetedza) inoshanda seyazvimiririra server. Ndokunge, iwe unogona kuve nemutengo wakasarudzika uye sevhisi iyo inenge iri pakati pekugovaniswa nekuzvipira. Seimwe poindi yakanaka, mune dzimwe nguva inopa sevhisi yekuchengetedza, saka haufanire kutarisira kuiswa uye kugadzirisa kweanoshanda system, software, chengetedzo, kuchengetedza, nezvimwe.
Gore kana gore rinotambira: Izvo zvakafanana nedzimwe nzira kune yechinyakare kubata kana kubata, asi zvinoshandisa akawanda maseva panguva imwe chete. Izvi zvinobvumidza kuita kuri nani, kuenzanisa mutoro, uye kubvumira kuti kana sevha imwe ikakundikana, imwe / s ichaenderera ichipa rutsigiro uye saiti kana sevhisi zvaisazodonha. Iko kusakosha mune ino kesi ndeyekuti kune vanhu, ma freelancers, kana SME, ibasa rinodhura.
Kuhaya domaini uye kubata pamwechete, ndiyo sarudzo yakanakisa?
Vamwe vanhu vanovhiringidza kubata nedomain. Asi hazvina kufanana, kunyangwe ichokwadi kuti mazhinji masevhisi ekugamuchira anopa zvese zvingaitwe pasina chikonzero chekuenda kune imwe kambani yechitatu kunyoresa duraini. Parizvino, vanopa izvi vanoita kuti maitiro acho ave nyore kwazvo kwauri, kusarudza kubva pawebhusaiti yavo chirongwa chekutora chaunoda uye kusarudza zita rezita uye TLD iwe yaunoda kunyoresa uye kupihwa.
El kubata, kana kubataIzvo chaizvo izvo, iyo nzvimbo kana zvivakwa zvinodiwa kuti uwane webhusaiti kana blog, iyo inosanganisira dhatabhesi, CMS software, maapplication, mafaera, uye zvese zvaunoda kuisa. Uye izvo hazvingosanganisire nzvimbo yekuchengetera, zvakare inosanganisira kugadzirisa zviwanikwa, RAM, bandwidth, nezvimwe.
Kune rumwe rutivi, Hutongi izita iro webhusaiti yako ichave naro. Iyo sevha iwe yawakashandira ine IP yakapihwa, asi icho hachisi chinhu chakajeka kune vashandisi vanotsvaga. Semuenzaniso, google.es inoshandisa sevha ine IP 142.250.217.67. Asi kana iwe uchitarisa, iwe ukaona zviri nyore kwazvo kuyeuka google.es kupfuura iyo nhamba, handiti? Naizvozvo, kunyoresa dura kuchaita kuti yako yekutambira ive nemumiriri uye nyore kurangarira zita (example.com, mycompany.es, sitename.org, nezvimwewo). Nenzira iyoyo, vashandisi pavanotsvaga zita rako rakanyoreswa, rinozoonekwa muinjini yekutsvaga.
Iwo masevhisi ayo anopa kunyoreswa kwezita anozokutendera iwe kusarudza yakakodzera, kuona kana yakatove yakanyoreswa kana kuti iri kushandiswa, kana kana iri mahara kwauri ...
Sezvauri kuona, iro zita rezita rinofambidzana ne TLD (Yepamusoro Chikamu Domain), inova iyo .es, .com, .net., .org, nezvimwe. Uku kuwedzera kunogona kuratidza mhando yewebhusaiti iri, kuve .com kumakambani, .es kwenzvimbo dzeSpanish, .org yemasangano, nezvimwe. Iwe unogona zvakare kusarudza izvi kana uchinyoresa zita rako rezita.
Muchidimbu, zano rakakura nderekuhaya kuitisa pamwe chete nezita rezita uye TLD kune yako saiti. Saka unenge uine zvese zvaunoda kubva pakutanga. Chikonzero chega chekusaita kondirakiti masevhisi ese ari maviri ndechekuti iwe unotova nezita rakanyoreswa uye iwe unongoda kuendesa kubva kune yapfuura yekutambira sevhisi kuenda kune yako nyowani yekutambira ...
Zvichienderana nebhajeti rauinaro uye nemhando dzekubata dzinokurukurwa pamusoro, iwe unofanirwa sarudza chakanyanya kukodzera yenyaya yako. Zvakare, kuti ikubatsire kusarudza sevhisi yakanaka, unofanirwa kutarisa zvinotevera parameter:
Server: Ndiri kureva kune kwanzi server inogarwa, pane matekinoroji, brand, nezvimwe. Kunyangwe zvingaratidzika kunge zvisina kukosha, iri kuramba ichiwedzera nekudaro. Zvirinani kuti iwe usarudze masevhisi ane data nzvimbo muSpain kana chero imwe nyika muEurope kuve nechokwadi chekuti vanoshanda pasi pemutemo wekuEurope wekuchengetedza data, unova wakanyanya. Dzivisa maChinese kana maNorth America masevhisi anozo chengeta data rako zvakasiyana zvakanyanya.
Yekugamuchira mhando: (ona chikamu chakapfuura kuti uone kuti nderupi rwurongwa rwakakunakira: gore, rakagovaniswa, VPS, yakatsaurirwa, ...).
Hardware kana zviwanikwa: mune iyi pfungwa, huwandu hweCCUs iwe unayo, iyo RAM, inowanika nzvimbo yekuchengetera (zvirinani kana iri SSD inopesana neHDD), kana iyo network bandwidth yakakosha. Izvo zvakakura zviwanikwa, iko kuita kuri nani uye mikana iyo sevhisheni inokupa iwe. Mukana wekuve VPS, aya maitiro anozoreva kune chaiwo mauniti (vRAM, vCPU,…), asi nechinangwa chinoshanda zvichave zvakafanana.
Zvinogumira- Chengetedza zvakanyanya kumiganhu inoiswa nemamwe masevhisi. Zvichienderana nezano, iwe unogona kunge uine zvirambidzo pahuwandu hwe data rinotamisirwa pamwedzi kana pazuva, uye kunyangwe pane bandwidth inopedzwa. Yakanyanya kukosha dhata uye iyo iwe yaunofanirwa kuongorora kana ivo vakasangana neanofungidzirwa traffic iwe yauchazove newebsite yako kana kwete. Uye zvakare, kune mamwe masevhisi ayo anopa zviwanikwa zvisingaite mune izvi, izvo zvakanaka kwazvo kudzivirira kunetseka nezvazvo.
Zvimwe zvevhisi: Sekuwedzera iwe unogona kutsvaga mamwe masevhisi kana zvakanakira zvinopihwa nemupi wekubatira, senge mukana wekunyora madomeni, kusarudza pakati pesystem dzakasiyana, kuchengetedza, mabasa ekuchengetedza, makopi ekuchengetedza, zvitupa zveSSL / TLS zveHTTPS, email mabasa ne wega domaini, otomatiki kumisikidzwa kweCMS (Worpress, Blogger, MediaWiki, Moodle, Magento, PrestaShop, osCommerce, ownCloud, NextCloud, Drupal,…), nezvimwe. Imwe poindi yakanaka kwazvo kune vamwe vashandisi ndiyo inogamuchirwa nzira dzekubhadhara. Vamwe vanosarudza kuzviita nekadhi rechikwereti, asi kune vamwewo vanosarudza kushandisa mamwe mabasa ekubhadhara, akadai sePayPal, nezvimwe.
Rutsigiro rwehunyanzvi: Ehe, kana iwe uine chero mibvunzo, kana sevhisi inomira kushandira chimwe chinhu, zvakakosha kuti mupi wako ape technical technical muSpanish kuti iwe ugone kutaurirana nevabatsiri pasina matambudziko. Kune rimwe divi, kana sevhisi iri 24/7, unogona kuvimba navo chero nguva panomuka matambudziko. Uye, sekuwedzera, zvinogona zvakare kunakidza kuti vane nzira dzakasiyana dzekubata (nhare, kutaura, email).
Mitengo VS Hunhu
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, mune dzino nguva zvakakoshawo kusarudza iyo domain kunyoresa uye yekutambira sevhisi na yakanakisa yemhando / mutengo chiyero zvinogoneka.
Chenjera, sevamwe mabasa epachena, kana zvakachipa zvakachipa, uve nenjodzi yehunhu hwebasa, uye webhusaiti yako ichave isingaenderane nenguva kwenguva yakawanda kupfuura kushanda, iyo isingazopa kunzwa kwakanaka uye icharasikirwa nevatengi nekushanya kunogona kuve purofiti.
Pakati pemamwe masevhisi ane zvimwe kana zvishoma zvirongwa zvisingadhuri, nyatsoongorora zvaunopihwa neimwe neimwe. Dzimwe dzingaite sedzakachipa kwazvo muyero yepasi, asi paunowedzera zvimwe zvekuwedzera zvisina kubatanidzwa, bhiri rinowana kukora. Nguva dzose sarudza vanopa izvo zviri pachena sezvinobvira, uye izvo zvisingavanze zvinowedzera zvavasinga tarise mumitengo yezvirongwa zvekutanga.
Mamwe maTLD emazita echizinda anodhura kupfuura mamwe. Semuenzaniso, .com kana .org inogona kudhura kupfuura a .es, kana .eu.
Uye zvakare, zvinokwanisika kuti iwo masevhisi anotendera kubhadhara kwemaawa ekushandisa, kana zviwanikwa zvinoshandiswa, zvinoita kunge zvakachipa zvakanyanya pakutanga, asi iwo mwero mitengo inovimbisa kuti iwe uchagara uchibhadhara zvakafanana chero iko kushandiswa. Nepo izvi zvinogona kutanga kukora uye kupedzisira zvabhadhara zvinopfuura avhareji mwero mwero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Kubata: ndezvei uye kuti ungasarudza sei chaicho
Zorin OS 16 inosvika yakavakirwa paUbuntu 20.04.3, yakavandudzwa mashandiro uye mamwe maapplication matsva